धनकुटामा पीसीआर मेशिन कहिले ? – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७७, ९ भाद्र मंगलवार २१:४८
धनकुटा ९ भदौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार दोस्रो हप्ता धनकुटालगायत १० जिल्लामा कोरोना भाईरस संक्रमण भए नभएको परिक्षण गर्न पीसीआर मेशिन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यतिका समय वितिसक्दापनि धनकुटामा पीसीआर मेशिन नआएपछि जनतामा निराशा छाउँदै गएको छ । यहि विषयमा संघीय सांसद राजेन्द्रकुमार राईसँग जानकारी माग गर्दै ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
पत्रकार महासंघको सभाहलमा आयोजित सो छलफल कार्यक्रममा संघीय सांसद राईले धनकुटाका लागि निर्णय भएको पीसीआर मेशिन अन्यजिल्लामा गएको हल्ला निराधार भएको जानकारी दिए । उनले केहि दिनमै पीसीआर मेशिन धनकुटा आउने आश्वासन दिए ।
सो अवसरमा संघीय सांसद राईले धनकुटामा धेरै विकासनिर्माणका कार्यक्रमहरु रहेको जानकार िदिए । उनले राष्ट्रिय गौरवका ओयोजना निरन्तर रुपमा सञ्चालन भैरहेको बताए । उनले धनकुटाको समग्र विकासका लागि संघ, प्रदेशर स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
यस्तै सो अवसरमा प्रदेश सांसद निरन राईले जिल्लालाई कोशी पहाडको स्वास्थ्य हव बनाउन शिक्षण अस्पताल बनाउन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जना सांसद नै खटिरहेको जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि कानून आवश्यक भएकाले आफुहरु कानून निर्माण गर्न क्रियाशील रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सांसद राईले औद्योगिक ग्राममा स्थापना गर्न तयारी भैरहेको कोशी पहाडकै ४० बेडको आईसोलेशन कक्षका लागि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सामग्रीका लागि सातै जना प्रदेश सांसदहरुले पहल गरिरहेको जानकार िदिए । उनले
सो छलफल नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा शाखका अध्यक्ष राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको महामारीको अवस्थामा पनि सरकारले २ महिना अघि निर्णय गरेको कोरोना भाईरस परिक्षण गर्ने अत्यावश्यक पीसीआर मेशिन कसको कमजोरीको कारण नआएको भन्दै कहिले आउने प्रश्न गरे ? उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले धनकुटालगायत १० जिल्लामा पीसीआर मेशिन दिने निर्णय गरेअनुसार ७ जिल्लामा परिक्षण नै शुरु भैसकेको जानकारी दिए । अर्को प्रसंगमा उनले दैनिक रोजगारीका मजदुरहरुका लागि अझै लकडाउन थपिदै गए राहतको आवश्यक पर्ने बताए ।
यस्तै धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विजयसन्तोषी राईले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै कोरोना भाईरस दिनप्रतिदिन महामारीको रुपमा फैलदै गएकाले धनकुटामानै कोरोना भाईरस संक्रमितको उपचार गर्नका लागी भेन्टिलेटरको सहितको कोरोना अस्पताल तत्काल स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सो कार्यक्रममा प्रदेश १ दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष नैन विश्वकर्मा, धनकुटा अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष सुनिलकुमार डंगोल, नागरिक समाज धनकुटाका अध्यक्ष सुन्दरवाबु श्रेष्ठ, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नगेन्द्र राई, सहसचिव हरिबहादुर लम्जेल, फोनिज धनकुटाका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, उद्योग बाणिज्य संघका कार्यकारी सदस्य रेजिना पलिखेलगायतले कोरोना भाईरसलाई नियन्त्रण गर्न सवैको सहयोग भूमिका आवश्यक भएको बताए । उनीहरुले धनकुटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न, यातायात कार्यालय पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनपर्ने, लगायतका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पूर्वमन्त्री थापा र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालवीच भेटवार्ता